Otu esi eme ka ike ochie PC na ngwaọrụ n'efu | Site na Linux
Otu esi eme ka ihe ochie PC jiri ngwa ọrụ n'efu
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Faịlụ FileLet jiri, Na-atụ aro
Christopher Tozzi kọwara otú igbanwe otu imagen nke anyi usoro ochie (arụnyere na igwe ochie) na a igwe ọzọ oge a y dị ike.
Ọtụtụ afọ gafere, Windows 3.1 wee pụọ na ụdị, ma anyị niile ejirila igwe dị ogologo na igwe dị ike. E wepụrụ PS / 1 m na okpuru ulo ogologo oge gara aga, yana ihe dị ka ọkara iri na abụọ kọmputa ndị ọzọ nwere ike ịnwe ike mgbakọ kọmputa karịa ekwentị m ugbu a.
Agaghị m eji ngwaike ahụ ọzọ, ọ ga-abụrịrị na tufuo ya. Mana dị ka geek kọmputa na onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na-achọsi ike, echiche nke ịnwe ohere ịnweta igwe ruo mgbe ebighi ebi, yana data niile dị na ha, kụrụ m ihe na-ezighi ezi. Ọ ga-apụta ịhapụ akụkụ nke oge gara aga - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọzọ karịa trajectị nke onwe m - na ịbanye ya na ether, ebe ọ na-enweghị onye nwere ike inyocha ya ọzọ.
Dabara nke ọma, e nwere ihe ngwọta. Site n'iji aka na - enweghị ego, ihe eji emeghe ihe, enwere m ike gbanwee PC ochie m ka ọ bụrụ igwe eji eme ihe ma bufee ha n'ime kọmputa m ọgbara ọhụrụ. Ihe ngwọta a na-enye gị ohere ọ bụghị naanị ịnweta data echekwara na desktọọpụ ochie, mana iji sistemụ ahụ rụọ ọrụ ọfụma dịka ọ dịbu.
Usoro dị mfe. Nke mbu, anara m draịvụ ike m na PC ochie m wee jikọọ ha na desktọọpụ m na-eji taa (nke na-akwado ihu ọma SCSI, ma ọ bụghị na nke a nwere ike ịbụ nsogbu). Mgbe ahụ, ejiri m dd ngwá ọrụ, nke etinyere n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkesa Linux niile, iji tụfuo ihe ndị dị na diski ahụ na faịlụ onyonyo foto na iwu dị ka:
dd ma ọ bụrụ = / dev / sda nke = / ụzọ / to / faịlị / disk1.img
Ma mgbe ahụ ka m bidoro hypervisor KVM ka ị bido onyonyo diski ahụ:
kvm / ụzọ / ka / faịlị / disk1.img
Nke a kwesịrị ịrụ ọrụ na ntanetị dị iche iche, dịka VMware na VirtualBox, mana KVM dị mfe karịa ka ọ dị mfe na Ubuntu. Ke adianade do, ọ na-akwado ihe ngosi ihe oyiyi "ụlọ ọrụ na-eduzi", ebe ọtụtụ ndị ọzọ na-achọkarị ụdị diski.
Isi: Di iche iche
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Otu esi eme ka ihe ochie PC jiri ngwa ọrụ n'efu
Na-akpali nnọọ mmasị 😀 daalụ nke ukwuu.
Zaghachi Javier García
Giancarlo Ticlayauri dijo
Ee ị nwere ike “ịba uru” ezigbo diski ike, wee buo ya na igwe na kwalite igwe okwu. Emeela m nke a ọtụtụ oge iji wụnye linux ọhụrụ ma ọ bụ ihe ọzọ na nkebi. Mana ọ dị oke egwu, ọ bụ ezie na ị kpachapụrụ anya, ị gaghị emebi ihe ọ bụla dị mkpa, ọ bụghị nke a tụrụ aro. Virtualbox na-agwa gị otu esi eme ya na enyemaka ahụ.
Zaghachi Giancarlo Ticlayauri
Enwere m igwe nwere okpukpu abụọ (win7 / ubuntu12.04) Enwere ike ịme nke a iji jiri win7 nwụnye nke dị na buut abụọ ozugbo na ubuntu?
Onwere onye mara ebe m nwere ike ibudata onyonyo Windows 3.11?
Oge ụfọdụ gara aga m weere nsogbu iji mepụta igwe arụmọrụ ma wụnye abụọ 6.22 na Windows 3.11 na njikọ Internetntanetị na-arụ ọrụ. Netscape Navigator, WinZip na klas ndị ọzọ iji gosi ụmụ akwụkwọ m.
Zaghachi ka hrenek
Kpọmkwem, ị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na akwado ya dịka nke a: egrep '(vmx | svm)' -color = always / proc / cpuinfo. Ọ ga-egosi vmx maka Intel na svm maka AMD, ma ọ bụghị na ọ naghị akwado ya.
Daalụ nke ukwuu, TT ^ TT adịghị arụ ọrụ, agbanyeghị, m na-eji ebe a na-eme ihe, n'ihi na ụdị qemu na-enweghị KVM dị nwayọ nwayọ maka m 😛
Ndewo, dị ka ihe na-atọ ụtọ oge niile!, Echetara m mgbe m dị obere, enwere m kọmpụta ojii niile nwere apụl apụl, ọ nwere nha TV analog, ọ nwere maka CD-ROM na amaghị m ihe ọzọ, 1 GB nke DD Echere m na o nwere, xD Ka oge na-aga kọmputa ahụ furu efu naanị ihe fọdụrụ m bụ DD brand caviar nwere akara apụl.
Otu ajụjụ, agbalịrị m ịgba ọsọ qemu-kvm ma buo modul ahụ, mana ọ na-agwa m na onye nhazi m anaghị akwado ya, ị maara ihe kpatara ya? Hà bụ naanị ụdị ụdị Intel nke nwere nkwado KVM?
Tozzi gbara isi nkwọcha. 😀
Henry Seron dijo
magburu onwe, oké ngwọta. N'ime ọrụ m, m ga-anapụta igwe nwere OS / 2, echekwara m ịme ya na dd, wee buru ya na vmware, enwere m olileanya na ọ ga-enwe nsogbu.
Zaghachi Henry Serón
Cocolio kachasị dijo
A mfọn, ọ ga-ekwe omume na ị nwere ike ịkọrọ gị ihe oyiyi gị? M ga-achọ inwe ike inyere ha aka, ebe ọ bụ na m hụrụ n'anya maka ịme ka usoro a pụta ìhè, na achọtala m ọtụtụ mana enwere m mmasị ịnọgide na-anwale, ekele, na ekele n'ọdịnihu.
Zaghachi Maximo cocolio
Ka ọ dị Flash na gam akporo
Chakra na-adaba nkwado maka i686